Al-shabaab oo goob fagaare ah ku toogtay 5 ruux (Akhriso Magacyada) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Al-shabaab oo goob fagaare ah ku toogtay 5 ruux (Akhriso Magacyada) * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Al-shabaab oo goob fagaare ah ku toogtay 5 ruux (Akhriso Magacyada)
By Ardaan Yare on 3rd March 2021
Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa fagaaro ku yaalla degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe waxaa ay ku toogteen Shan ruux oo ay u jeediyeen Eedeymo kala duwan iyo inay la Shaqeynayeen dowlado Shisheeye
Dadka la toogtay oo dhamaantood rag ahaa ayaa waxaa goobta lagu toognayay ku sugnaa qaar kamid ah Shacabka degmada Jilib oo ay Al-Shabaab ku amreen inay daawadaan.
Dadka ay Al-Shabaab ku toogteen fagaaro ku yaal degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe ayaa waxaa ay badankood ku eedeeyeen inay ku lug lahaayeen qorshayaal lagu duqeeyay Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab, lana qabtay , iyaga oo hagaya diyaaradaha Drone-ka, waxaana dadka la toogtay ay kala yihiin.
1: Abuukar Xasan Maxamed oo ay Al-Shabaab sheegeen in uu qirtay in uu wada-shaqeyn la lahaa hay’adda CIA-da Mareykanka.
2: Xasan Maxamuud Maxamed (Xasan dheere ) oo ay ku eedeeyeen in uu la Shaqeynayay hay’adda CIA-da Mareykanka.
3: Mahad Cabduqaadir Aadan oo loo yaqaanay Mahad Qaadoole ayay Al-Shabaab ku eedeeyeen in uu Shaqeynayay hay’adda CIA-da Mareykanka..
4: Axmed Cabdi Cabdullaahi Salmaan oo ay Shabaab sheegeen in uu basaas u ahaa hay’adda CIA-da Mareykanka.
5: Macalin Abuukar Maxamed Calasow oo ahaa Nin Oday ah oo jiray da’ada 63, kaas oo ay ku eedeeyeen in uu basaas u ahaa hay’adda CIA-da Mareykanka.
Al-Shabaab ayaa horay waxaa meelo kamid ah Soomaaliya ku toogteen dad ay ku eedeeyeen inay la Shaqeynayeen Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowladaha taageera, kuwaas oo ay ka qabteen degaannada ay maamulaan.
Xukuumadda Soomaaliya oo ka hadashay Shirka u socda Madaxda
Taliska Ciidanka Xoogga oo War kasoo saaray weerarkii Al-shabaab ee Bariire